Blog Teknụzụ 10 nke ị maghị Banyere | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 25, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Blọọgụ Teknụzụ dị mkpa Martech Zone. Mgbe m dere banyere otu teknụzụ akọwapụtara na-emetụta ahịa, ọ na-abụkarị mkpali na teknụzụ teknụzụ. Ha na-arụ nnukwu ọrụ na ikpuchi ozi ọma na echiche banyere teknụzụ, mana ịhapụ ngwa ahịa ya bara uru.
Nnukwu ụmụ nwoke na-anwa ịnata scoop kachasị akụkọ, asịrị kachasị ọhụrụ, ma ọ bụ na-anwa ịtụba nnukwu post post nke na-adọrọ uche mmadụ niile. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-aga na Teknụzụ nke ị kwesịrị ịma banyere ya. Ndị folks a nọ n’elu ya oge niile!
Nke a bụ Blog Technology Blog ị maghị Banyere:
Kedu ihe Noo - Patric bụ ezigbo enyi ya na ụlọ ọrụ ya na-akụzi ‘ndị na-abụghị techies’.
Uzo nzuzo - Jeff nwere ndụmọdụ dị oke ọnụ yana edemede ya na-atọ ọchị mgbe niile.
Ken McGuire - Ken na-ekpuchi etu teknụzụ si agbanwe ndụ anyị kwa ụbọchị.
Mana I bu Nwa agbogho - enwere ihe efu nke olu nwanyị na oghere Tech. Adria na-ejuputa ya.
StarterTech - Nke a blog na-eme ka teknụzụ dị mfe ọgụgụ.
Teknụzụ & Azụmaahịa Iwu Blog - Eric na-ekpuchi ikpe ụlọ ikpe niile metụtara ndị ọkaibe na ndị ahịa.
Ihe mgbawa nke Chip - Ogologo oge enyi nke Martech Zone, Mgbawa mgbe niile mkpachị ụfọdụ nke kacha mma ozi ọma na net.
2 ahịrịokwu ma ọ bụ obere - Ọbụna dị mkpirikpi karịa akwụkwọ Chip, enyi Bill Dawson na-aga n'ihu na teknụzụ ma na-enye ụfọdụ nkọwa pithy.
Ahụekere irite uru - enyi ọzọ nke blog, Thor Schrock jikọtara teknụzụ na uru na blọọgụ ya.
Blog Blog nke Joe ọ bụla - ezigbo enyi Jason Bean bu onye na-adighi na blog nke ọ bụla.
Mgbe ụfọdụ blọọgụ enweghị ụdị ahụ na-egbuke egbuke - mana ọdịnaya na-adị mgbe niile! Tinye blọọgụ ndị a na onye na-agụ ndepụta gị ma enwere m obi ike na ị gaghị enwe mmechu ihu.
Tags: njigide ndị ahịadata mmekọrịta
Comụaka Cobblers enweghị Akpụkpọ ụkwụ
Jenụwarị 29, 2010 na 7:24 PM
Chei, ekele, Doug! Enwere m nsọpụrụ itinye aka na ndepụta dị egwu a - ọkachasị ndị dịka Jeff Atwood.